Nezvedu - YiXing International Logistics (GuangDong) CO., LTD
YIXING International Logistics (Guangdong) Co, Ltd. yakavambwa muna Nyamavhuvhu 2006, kubvira pakagadzwa, isu tanga tichipa akateedzana epasi rese ekutumira mhinduro kune echinyakare ekugadzira mafekitori, achive piyona mumakungwa ekutakura zvinhu zveSino- US yakakosha mutsara .
Nguva dzose, kambani yedu nyanzvi mukuvandudzwa kweSino-US nyika dzepasirose dzakakosha nzira yekufambisa, senge FCL uye LCL yekufambisa, United States yekumhiri kwemakungwa kugadziridza, kutapuriranisa, pasuo nesuo kuendesa, iyo United States yekumba logistics services, inoyambuka muganho. zvigadzirwa zvekutengesa cheni manejimendi uye yakazara yakazara yeyambuka-muganho logistics services.
Isu tinokwanisa kupa mabhizimusi epasirese nemabasa ekuchengetera zvinhu muChina: kusanganisira kuunganidza, kusunungura, kurongedza, kunyora mazita, kupaka uye kutakura uye zvimwe zvinongedzo. Isu tine matura angangoita gumi uye vashandi vehunyanzvi muEast China (Jiangsu, Zhejiang neShanghai) neSouth China (Pearl River Delta) zvichiteerana. Kana zvigadzirwa zvako zvichida kutengwa kubva kumafekitori eChina uye kutumirwa kune dzimwe nzvimbo senge United States kana Europe, tinogona kukupa inoenderana masevhisi iwe.
Mu2014, kambani yedu yakarongeka marongero muUnited States, United States muLos Angeles, Atlanta, New York uye mamwe akakosha ekufambisa hub hub maguta akabatana mhiri kwemakungwa imba yekuchengetera uye kumisikidzwa kweUnited States kutarisisa logistics timu. Iyo kambani inovimba nesimba reruzivo ruzivo kuti ipe vatengi seti yemarudzi epasi ekugadzirisa mhinduro, ichitsamira pane mukurumbira wakanaka uye sevhisi yebasa kuhwina rutsigiro rwevatengi. Kuburikidza neInternational service network kugadzirisa iyo United States yezvinhu zvekuchengetedza, kubvumidzwa kwetsika uye kuendesa kwe "yekupedzisira kilometera" yedambudziko, kuzadzikiswa kweUnited States panguva yese yekuendeswa kusevhisi sevhisi.
Sei ungasarudza isu?
1.Kuwanikwa kweOVS Warehouse - Kupa iyo inogamuchira uye yekutakura, kurongedza, kunyora mazita, palletization, ipfupi-nguva yekuchengetera etc. warehousing services.
2. Strong Tsika Mano Kugona --- Tine vekare vetsika vatengesi vane nzwisiso yakadzama pamitemo yeCustoms yenyika yakatengwa, ine nhoroondo yakajeka paCustoms.
3. Yakadzikama nguva-inoshanda paFCL & LCL-- Yakatsvaga inoshanda & inoshanda teki yekutakura kusangana nezvinodiwa nevatengi, ichipa musuo kune musuo sevhisi kumaAmazon vatengi pasi rese, nekukurumidza, nyore, isingadhuri!
4. Sarudza isu uye haunganyadziswe!